Home ၊အညာနွေတမာမြေ: အီးအီးစားပြောရင် ကြိုက်လို့ ထင်တယ် (မောင်ကျေးအော်)
အီးအီးစားပြောရင် ကြိုက်လို့ ထင်တယ် (မောင်ကျေးအော်)
ခေတ်ပျက်သန်းကြွယ်သူဌေး ကြီးကိုတေဇက သူ.ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ကိုသန်းေ၇ွရဲ. သားမက်လို.ပြောနေတာဟာ ကောလဟလတွေပါ။ လက်နက်ကုန်သည်ဆိုတာလဲ မဟုတ်ပါဘူးလို. ပြောဆိုထားတာကို Forbes မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖေါ်ပြခဲ.တယ်လို. သိရပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ နိုင်ငံရေးသတင်း မဟုတ်လို. ပြန်ချေပပြောဆိုစရာလားလို. ထင်မြင်ကြပါလိမ်.မယ်။ ဒါဟာ ကိုတေဇရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဲလို. ပြောချင်လဲ ပြောကြပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမဲ. အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေက အာဏာရှင်တွေနဲ. ပတ်သက်တဲ. အသိုင်းအ၀န်းရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေဟာ တိုင်းပြည်အရေးထဲမှာ အရေးပါတဲ့ ကိစ္စတွေအဖြစ် ထင်မြင်ယူဆလို့ ပြောရပါဦိးမယ်။ တကယ်တော့ ကိုတေဇဆိုတာ မနေ.တနေ.ကမှ လူထဲသူထဲ နာမည် ထွက်လာတာပါ။ ပြည်သူလူထုကို စစ်အစိုးရက ဘယ်လောက်ဘဲ ဂရုမစိုက်စေဦးတော့။
သူတို.လုပ်သမျှ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ ပြည်သူထဲကလူတော်လူတတ်တွေမပါဘဲ လုပ်ချင်လို.မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီတော. သူတို.ကြားက အဖြစ်အပျက်တွေ အခြေအနေတွေဟာလဲ ဘယ်သတင်းမဆို အနှေးနဲ. အမြန်ဆိုသလို ပြည်သူတွေကြားရောက်လာတာပါဘဲ။
ကိုတေဇက သူဟာ ကိုသန်းရွေသားမက်ပါဆိုတဲ့ သတင်းကို ကောလဟလပြောပြော-အတည်ပေါက်လို. သတ်မှတ်သတ်မှတ်။ ဘယ်သူကမှ ယုံကြည်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူတွေထဲမှာ ကိုတေဇအကြောင်း စပြီးသတင်းထွက်လာတာ ကျပ်ပြေးနေပြည်တော် တည်ဆောက်ခါစကပါ။ ကျပ်ပြေးနေပြည်တော်ကို တိုးတိုးတိတ်တိတ်ခိုးပြီးတည်ဆောက်နေတယ်။ တည်ဆောက်ခါစက ကျပ်ပြေးတ၀ိုက်က ပြည်သူတွေက ဒီကောင်တွေ ပျဉ်းမနား-ရေနီ-တ၀ိုက်မှာတောင်တွေဖြို-တောတွေခုတ်ပြီး ဧရာမ ထုနဲ.ထည်နဲ. အဆောက်အဦးတွေ ဆောက်နေတယ် ။
ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲ မသိဘူးလို. ပြောကြပါတယ်။ နောက်တော. မြိုတော် ပြောင်းမယ်ဆိုသလိုလို။ လက်နက်စက်ရုံတွေလိုလို။ ထင်ရာမြင်ရာ မှန်းဆပြောကြပြန်တယ်။ ( နောက်ဆုံးတော. ဒါဟာ အမှန်ဖြစ်လာတာဘဲ။) နောက်ပိုင်း ကျပ်ပြေးမှာ ဆောက်လုပ်ရေးကုပ္မဏီိတွေကို လုပ်ငန်းတွေချပေးတယ်။
အဲဒီမှာ တေဇဆိုတဲ.ကောင်တကောင် လူတွင်ကျယ်ဖြစ်နေတယ်။ သူက လက်နက်မှောင်ခိုကုန်သည်။ စစ်အစိုးရအတွက် ၈၈နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာ လက်နက်မှောင်ခိုဝယ်ပေးနေသူလို.ပြောကြပြန်တယ်။ အဲဒီကိုတေဇဟာ ဒေါ်ထူးဆိုတဲ. အတော်အတန်ချမ်းသာတဲ. အမျိုးသမိးကြီးတဦိးရဲသားမက်။ ထူးဆိုတဲ. ကုပ္မဏီိထောင်ထားတယ်လို. သတင်းကြားရပြန်တယ်။
နောက်ပိုင်း ကျပ်ပြေးနေပြည်တော် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးကိုသန်းရွေ လှည်.ပတ်ကြည်.တယ်။ သမီးတွေ ပါလာတယ်။ ကိုတေဇက သမီးတွေကို ဖေါ်လံဖားပြီး နေပြည်တော် ကျပ်ပြေးတခွင် လိုက်ပို.လိုက်ပြတယ်။ ( သန်းရွေကြီးသမီးတွေက တေဇကို ကိုကိုတေဇ-ကိုကိုတေဇ နဲ.။ ကိုကိုတေဇခြင်းမိုးမွန်နေတာဘဲ။ ) တေဇက ရုပ်က ဖြောင်.ဖြောင်.။ ကိုသန်းရွေသမီး မယ်ရုပ်ဆိုးတို.ကလဲ ကဲကဲဆိုတော. -စသဖြင်. ပြောလာဆိုလာကြတယ်။ မကြာပါဘူး။
ကိုတေဇက စစ်အစိုးရအတွက် လက်နက်ဝယ်ပေးယုံမက ကိုသန်းရွေတို.မိသားစု သစ်လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တာ -ကျောက်လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တာ- တခြားစီးပွားရေးလုပ်ချင်တာတွေပါ ၀ိုင်းလုပ်ပေးနေရပြီ။ ဒါကြောင့် မယ်တော်ကြီးဒေါ်ြိကိုင်ကြိုင်က ( မောင်တေဇလေးက အားကိုးရတယ်။ မောင်တေဇလေးက အားကိုးရတယ်နဲ.တဖွဖွပြောသတဲ.) လို့ လူထုထဲမှာ ကြားလာရပြန်တယ်။ နောက်ဆုံးတော. သန်းရွေကြီး သမီးတယောက်နဲ. တေဇ ညားကြလေသတည်းလို. သတင်းထွက်လာပါတော.တယ်။
အင်း။ ဆန်တော့မဆန်းပါဘူး။ ပြည်သူတွေက စစ်အစိုးရ ရုပ်မြင်သံကြားက ပြခဲ့ တဲ့ တရုတ်ကား ပြည်သူတရားရှင် ပေါင်ချိန်ဇာတ်ကားတကားမှာ အခု ကိုတေဇနဲ့ သန်းရွေသမီးဇာတ်လမ်းမျိုး ကြည့်ဘူးနေပြီးသားပါ။
ပေါင်ချိန်ဇာတ်လမ်းတခုမှာ တောသားပညာတတ်က တောမှာသားနဲ.မယားကို ထားခဲ.ပြီး နေပြည်တ်ာမှာ ပညာရှိ စာမေးပွဲသွားဖြေတယ်။ ဘုရင်.သမီးက ပညာရှိကို သဘောကျပြီး လိုချင်တော.. ပညာရှိလဲ တောက သားနဲ.မယားကို မေ.ပြီး ဘုရင်.သမီးနဲ. ယူလိုက်တယ်။
ဘုရင်ကလဲ ဒီကောင်ကိုအသုံးချစရာရှိလို. သားမက်တော်လိုက်တယ်။ တောက မယားက ကလေးချီိပြီးလိုက်တာတော့ မယားနဲ့ ကလေးကို သတ်ဘို့ ကြံရွယ်တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ပြည်သူ့တရားရှင် ပေါင်ချိန်ဆီ ရောက်လာတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ ကိုသန်းရွေကြိးမိသားစုက ကိုတေဇကို သားမက်တော်ထားတယ်ဆိုတဲ. သတင်းကြာရတော. ပြည်သူတွေက ( ဟို-ဟို ပေါင်ချိန် ဇာတ်ကားထဲကလိုပေါ.) လို.ပြောကြဆိုကြတယ်။ နမူနာဇာတ်လမ်းကလေးပြောပြီး လူတိုင်းက ဖြစ်နိုင်တယ်လို.ဘဲ မှတ်ချက်ချကြပါတယ်။ တဆက်ထဲမှာ ကိုတေဇ ဘယ်လိုလူစားလဲဆိုတာလဲ စိတ်ဝင်စားကြပြန်တယ်။ ကိုတေဇက စစ်တက္ကသိုလ်က ကျောင်းမပြီးဘဲ အပြစ်တခုနဲ. ထွက်လာခဲ.ရသူ။
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ.ခပ်စောစောအိမ်ထောင်ကျ။ သားကြွေးမှု မယားကြွေးမှု ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဝေလေလေဖြစ်နေချိန်။ ပြင်ပစီးပွားရေးတခုနဲ.အောင်မြင်နေတဲ. သူငယ်ချင်းဟောင်းတယောက်ဆီမှာ အလုပ်တောင်းတယ်။ အလုပ်တောင်းတော. သူငယ်ချင်းက အတော်အတန်ချမ်းသာတဲ. ဒေါ်ထူးသားမက် တောင်မရောက် မြောက်မရောက်ကိုတေဇကို ပေးစရာအလုပ်မရှိဖြစ်နေတော. ( ဟေ.ကောင်--မင်းတို.လို ကောင်မျိုး ပေးစရာ အလုပ်မျိုး ငါ.ဆိမှာ မရှိဘူး) လို. ပြောပါသတဲ.။
အဲဒီိတော. ကိုတေဇက ( ဟေ.ကောင် --သူငယ်ချင်း --မင်းခိုင်းချင်တာခိုင်းကွာ။ ပိုက်ဆံရပြီးရော--မင်းဘယ်သူ.ကို သတ်ချင်သလဲ။ ဘယ်သူ.ကို ရိုက်ချင်သလဲ -ပြော) လို. ပြန်ပြောခဲ.ပါသတဲ.။ တကယ်လဲ ကိုတေဇဟာ သူပြောသလို ငွေရပြီးရော လုပ်ခဲ.ပုံပါဘဲ။
ကြို့ ပင်ကောက်မြို့ဆက် ကိုတေဇကို ကြို့ပင်ကောက်သူ ကြို့ပင်ကောက်သားတွေ ပြောကြတာက ( တေဇတယောက် ဒေါ်ထူးရဲ.သားမက်ဖြစ်လြာ့ပီးနောက် ဒေါ်ထူးက လုပ်ငန်းထောင်ပေးတယ်။ ဆန်စက်လုပ်တော. ဆန်စက်ရှုံး။ ပွဲရုံလုပ်တော. ပွဲရုံ ရှုံး။ သစ်စက်လုပ်တော. သစ်စက် ရှုံး။ ဒီကောင် စစ်အစိုးရနဲ.ပေါင်းပြိး လက်နက်မှောင်ခို လမ်းကြောင်းဆက်မိသွားမှ မြတ်တော.တာဘဲ) တဲ့။
နောက်ပိုင်း တော. ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် အားကိုးရတဲ.မောင်တေဇတယောက် ပြည်သူ.ဘဏ္ဍာ ကိုယ်ဟာမှတ်ယူ။ ထင်သလိုကျဲနိုင်ပြီး( မြင်မြင်ကရာ ငါ.ယောက္ခမ ထန်းတော ) ဆိုတဲ.စကားအတိုင်း တပြည်လုံးက ဟိုတယ် လုပ်ငန်း-လေကြောင်းလုပ်ငန်း-သစ်လုပ်ငန်း-ကျောက်လုပ်ငန်း-ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း---အင်းအင်း-- မရေမတွက်နိုင်တဲ. လုပ်ငန်းမှန်သမျှ ဦးတေဇပိုင်ဖြစ်တော.တာပါဘဲ။ အံ.သြစရာတော. မရှိပါဘူး။ ဒီလိုနဲ. ပြည်သူတွေကြားမှာ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ရော-ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပါ ကိုတေဇဟာ ကိုသန်းရွေသားမက်လို. သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်။
ဒီသတင်းက ဟုတ်မှန်နိုင်တာ သေချာပေမဲ. ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးကိုသန်းရွေမိသားစုအတွက် နိုင်ငံမှာ ပါဝါတစ်ရနေသူ မိသားစုတခုအဘို. ကိုယ်.သမီးက မယားရှိလင်ကို ခိုးတာ မိဘကပါ သဘောတူလက်ခံထားတဲ.ကိစ္စကြီး ဖြစ်နေလို. အရှက်နဲ. ဂုဏ်သိက္ခာဆည်ရမဲ. လိုအပ်ချက်တခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ဖြေရှင်းပေးနေသူတွေကတော. နာမည်ကြီးကုပ္မဏီပိုင်ရှင် ခေတ်ပျက်သူဌေးအုပ်စုတွေပါဘဲ။
သူတို.ရဲမန်နေဂျာတွေ ၀န်ထမ်းတချို.တွေကတဆင်. ဦတေဇက ဦးသန်းရွေသားမက် မဟုတ်ပါဘူးလို. တိုးတိုးတိတ်တိတ် သတင်းလွင်.ပေးတတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူ.ဆီက ကြားရ ကြားရ ဖြေရှင်းပု့စကားလုံးက တပုံစံထဲ။ လေယူလေသိမ်းက အစ အားလုံး တူတယ်။ မကြာသေးခင်က ကုပ္မဏီကြီးတခုမှာ မန်နေဂျာလုပ်နေတဲ. မိတ်ဆွေတယောက်က ( ဦးတေဇက ဥိးသန်းရွေသားမက် မဟုတ်ပါဘူး) လို. စကားဆိုလာပါတယ်။
ဒါနဲ..လူရင်းခြင်း ပြောမနာဆိုမနာ ဖြစ်နေတဲ.မိတ်ဆွေကို ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ တေဇ သန်းရွေသားမက် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ ယုတ္တိရှိမရှိ ကိုယ်.ဥာဏ်နဲ.ကို စဉ်းစားကြည်.ပါ။ တေဇဟာ အသက် ၄၀ကျော်ဘဲ ရှိသေးတယ်။ ၅၀ မပြည်.သေးဘူး။ မယားကြီး ဖြစ်သူ သီတာဇော်နဲ.လဲ မပေါင်းရဘူး။
တေဇလို ကျိကျိတက်ချမ်းသာနေတဲ. အရွယ်ကောင်းယောင်္ကျားတယောက်က ယူချင်တယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်က အချောအလှ ဘယ်မိန်းမကိုမဆို ခေါင်းခေါက်ယူလို.ရနိုင်တယ်။ သူ.ရဲချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကြောင့် သူ့ အထိုက်အလျောက် တင်တောင်းရင် ပညာတတ်မိန်းမယူမလား။ ချမ်းသာတဲ့ အသိုင်းအ၀န်းကယူမလား။ ရုပ်ရှင် မင်းသမီးတွေယူမလား။
ဆတ်ကော့လတ်ကော့ မော်ဒယ်သမီးလေးတွေယူမလား။ အပျိုယူမလား။ တခုလတ်ယူမလား။ ၅ခုလတ်ယူမလား။ တယောက် ယူမလား။ ၁၀ယောက် ယူမလား။ ယူမယ့်မိန်းမတွေ ရာနဲ.ချီ ရှိနိုင်တယ်။ ခင်ဗျားသာ ကိုတေဇနေရာမှာဆို မိန်းမတယောက် မယူဘဲနေမလား။
ချမ်းသာပြီး သွေးသားနိုးကြားဆဲယောကျာင်္းတယောက်။ မိန်းမ တယောက်မှ တရားဝင်မရှိဘဲ တကိုယ်တည်းနေလာတာ ၁၀နှစ်နီးပါးရှိပြီး။ တေဇအတွက် လောက စည်းစိမ်ခံနိုင်ဘို.အခြေအနေနဲ. အခွင်.အရေးက မိုင်ကုန်ပေးထားတာ။
တေဇလို မချမ်းသာဘဲတောင် အခွင်အရေးသာရခဲ.ရရင် ဘယ်ယောကျာင်္းမဆို ၂ယောက်လောက်တော. အနဲဆုံးလိုချင်တတ်ကြတာ။ တေဇက ရုပ်လဲ ရုပ်ချော။ ( ကိုတေဇကို ရုပ်နဲ.ပတ်သက်ရင် လူချောလူသန်.လို.ဘဲ သတ်မှတ်ပါ.မယ်။ ) ခင်ဗျားသာတေဇလောက် အခွင်.အရေးကောင်းရရင် မိန်းမတယောက်မှ အနားမရှိဘဲနေမလား။ ဘုရား-ရဟန္တာလဲ မဟုတ်ဘူး။
တေဇဟာ အာဏာနဲ.အထိမ်းခံထားရတဲ..သန်းရွေရဲ.သားမက်မို. မိန်းမကိစ္စ ဘရိတ်ဆွဲနေရတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူက ဘယ်လိုငြင်းချက်ထုတ်မလဲ။ လောက ယုတ္တိဗေဒအရ တေဇဟာ သန်းရွေသားမက်စင်စစ် ဧကန်ဖြစ်တယ်လို. ပြောချလိုက်မိပါတယ်။ ဒီတော.မှ မိတ်ဆွေက ( အင်း--- ဒီလိုတော.လဲ ယုတ္တိရှိပါတယ်။ ဟုတ်လောက်ပါတယ် )လို. ကောက်ချက်ပေးပါတော.တယ် ။
ကဲ မိတ်ဆွေ --- ကိုတေဇက သူဟာ စစ်အာဏာရှင် ကိုသန်းရွေသားမက် မဟုတ်ပါဘူးလို. ငြင်းချက်တွေထုတ်ဖြေရှင်းနေတာ ဖြစ်နိုင်၏ မဖြစ်နိုင်၏---- ကိုယ့်ဥာဏ်နဲ့ကိုယ်သာ စဉ်းစားကြပေတော့။ စာရေးသူကတော့ ကိုတေဇ ဘာပြောပြော ( အီးအီးစားပြောရင် ကြိုက်လို့ထင်တယ်)
(ဆောင်းပါးပါ အချက်အလက်များသည် ပေးပို့လာသော ဆောင်းပါးရှင်၏ အာဘော်သာဖြစ်ပါကြောင်း -- အညာနွေ)